I-Imperial County, CA • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu Massage
Ngabe siyazibuza ukuthi bakuthola kanjani ukugcotshwa komzimba ne-Nuru massage e-Imperial County, CA ngalezo zikhathi?
I-Imperial County iyisifunda esifundazweni sase-US saseCalifornia. Ngokubalwa kwabantu kuka-2010, inani labantu lalingu-174,528. Isihlalo sesifunda yi-El Centro. Isungulwe e1907 kusuka ekuhlukaneni kweSan Diego County, bekuyindawo yokugcina ukwakhiwa eCalifornia. Ngabe siyazibuza ukuthi bathola kanjani ukugcobisa umzimba nokuhlikihla uNuru e-Imperial County, CA ngalezo zikhathi?